မြရွက်ဝေ: သုံးလွန်းတင်နှင့် ဟင်းလေး
ဆွမ်းစားစည်တီးသည်တွင် ဦးပဉ္စင်းများ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးတော်မူကြသည်။ ဦးပဉ္စင်းများ ရေနွေးပွဲထိုင်နေသည်တွင် ကိုရင်များနှင့်တပြိုင်နက် ဆရာမုန်း ထမင်းပွဲဝင်ထိုင်ရလေသည်။ နေ့ဆွမ်းအတွက် ရေမြက်ရွာမှ ဆွမ်းအိုးတလုံး။ ရွာသာအေးရွာမှ ဆွမ်းအိုးတလုံး၊ မြေပန်းတောင်ရွာမှ ဆွမ်းအိုးတလုံး၊ ပြည့်အိုင်ရွာမှ ဆွမ်းအိုးတလုံးဟူ၍ နေ့စဉ်အမြဲ ဆွမ်းအိုးလေးလုံးရှိသည်။ သည်အထဲတွင် အလျဉ်းသင့်၍ ပို့လာသော သဒ္ဓါဆွမ်းအိုးများလည်း ရှိသေးသည်။ ကိုရင် ကျောင်းသားတို့ ရွာပေါင်းစုံ ဆွမ်းခံ၍ရသည်မှ ကောင်းနိုးရာရာ ဟင်းခွက်အချို့သည်လည်း ဘုန်းတော်ကြီးပွဲသို့ ရောက်သေးသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးဥက္ကံသနှင့်တကွ ဦးဓမ္မ၊ ဦးသုမန၊ ဦးသောဘိတ စသော ဦးပဉ္စင်းလေးပါးတို့ ဘုဉ်းပေး၍ မကုန်နိုင်။ ဆွမ်းနှင့်ဟင်းလျာ အလျှံပယ် ဖြစ်နေတတ်သည်။ ဆရာမုန်းတယောက်အတွက် ဘာမျှမထူးခြား။ ကိုရင် ကျောင်းသားများ စားမကုန်၍ ထမင်းခြောက်လှန်းရသေးသည်။ ဟင်းကျန်များကိုလည်း ဟင်းလေးအိုးမှာ လောင်းထည့်ပစ်ရသေးသည်။ ဟင်းလေးအိုးဆိုသည်မှာ ဆွမ်းဟင်းကျန်များ စုပေါင်းရောထည့်ထားသော အိုးဖြစ်သည်။
"ဒီတနှစ်တာတော့ ဆရာမုန်းကို ဦးဇင်းတို့ကပဲ စားရေးသောက်ရေး တာဝန်ယူပါရစေ။ မချို့ငဲ့စေရပါဘူး။ နောင်နှစ်တော့ ကျောင်းဆရာရဲ့ သဘောပေါ့"
ရောက်ရောက်ချင်းပင် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးဥက္ကံသက အမိန့်ရှိခဲ့သဖြင့် ဆရာမုန်းမှာ ကျောင်းသားများနှင့်အတူ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား ဖြစ်နေခဲ့ရသည်။ သို့သော် ဆရာမုန်း စိုးရွံ့နေမိသည်။ ရွာပေါင်းစုံမှ ဘုန်းတော်ကြီးအား ရည်မှန်း၍ လှူဒါန်းသည့် ဆွမ်းကွမ်းဖြစ်ချေသည်။ မဆီမဆိုင် မိမိက ဝင်စားသဖြင့် အပြစ်ထိုက်ချေတော့မည်လော။ အပြစ်ထိုက်လျှင် ကျေပါစေတော့ဟူ၍ အားလပ်တိုင်း ဘုရားခြေရင်း ကျောင်းတလင်းဝယ် သန့်ရှင်းမပြတ် တံမြက်ခတ်ရသည်။ မြက်ထိုးရသည်။ ဆရာက မြက်ထိုး အမှိုက်လှည်းသောအခါ ကျောင်းသားများက ဝင်၍ကူညီကြသည်။ နှစ်ရက် သုံးရက်ကြာသောအခါ လှဲစရာအမှိုက်နှင့် ထိုးစရာမြက် မရှိတော့ပေ။
"အပြစ်မထိုက်ပါဘူး ဆရာမုန်းရဲ့။ ဦးဇင်းက ကံသုံးပါးနဲ့ စွန့်ပြီးသား ဆွမ်းကွမ်းပါ။ မြိန်မြိန်သာ သုံးဆောင်ပါ"
ဆရာတော်က ဆရာမုန်း၏ သံသယကို ဖျောက်ပေးတော်မူလေသည်။ သို့သော် ဆရာမုန်းသည် မိမိလုပ်ကိုင်နိုင်သည့် ကျောင်း၏ဝေယျာဝစ္စ၊ ဘုန်းကြီးပျံ၏ ဝေယျာဝစ္စ ဟူသမျှကို အားလပ်တိုင်းပင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပေးရသည်။ တရက် နှစ်ရက်ကြာလျှင် ဆရာမုန်းအတွက် နေရာမှန် တွေ့လာသည်။ တပေါင်း တန်ခူးတွင် ကျင်းပမည့် ဘုန်းကြီးပျံပွဲအတွက် ယခုကပင် ပြာသာဒ်၊ လောင်တိုက်၊ မဏ္ဍပ်စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နေကြပြီ။ တညင်ရွာမှ ယာယီစပ်သမားများက အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ဆေးရေးနေကြသည်။ လူပေါင်းအစိတ် မနေမနား ရေးဆွဲနေကြရ၏။
ဆရာမုန်းသည် ပန်းချီဝါသနာပါခဲ့သူဖြစ်၍ တတ်အားသ၍ ဝင်ကူသည်။ ကနုတ်ပန်းများ ဝင်ဆွဲပေး၏။ တချက်ခုတ်၍ သုံးချက်ပြတ်သည်ဟု ဆိုရချေမည်။ မိတ်ဆွေတိုးသည်။ ယာယီကနုတ်ပန်းဆွဲနည်းပညာနှင့် မြေဆေးသုံးနည်းပညာတို့ကို နားလည်လာသည်။ နောက်... မူလတန်းကျောင်းအတွက် သင်နည်းအထောက်အကူပြု ရုပ်ပုံကားချပ်များ ရေးဆွဲခွင့်ရလာသည်။ စပ်သမားများကပင် 'ဘောင်'ခွေပေးကြ၏။ စာသင်ခန်းမှာ ကပ်ထားနိုင်သည်။ မူလတန်းစာသင်ခန်းသည် ပန်းချီကားချပ်တို့ဖြင့် စိုပြည်လာတော့၏။ အဓိက အသုံအဝင်ဆုံး ပန်းချီကားချပ်ကြီးမှာ ဗျည်း၂၆လုံး လင်္ကာရုပ်ပုံကားချပ်ကြီးပင် ဖြစ်၏။ ကျောင်းနေစ ကလေးများမှာ တောက်ပသော အရောင်ကို နှစ်သက်သည်။ ရုပ်ပုံကို ကြည့်လိုလှသည်။ ဆရာမကြီးအတွက် မူလထက် ပိုမိုထိရောက်စွာ သင်ကြားနိုင်ပေသည်။
စပ်သမားများက သူတို့နှင့်အတူ ပျော်ပျော်ပါးပါး ထမင်းဝင်စားပါရန် ဖိတ်ခေါ်သည်။ ဆရာတော်က ခွင့်မပြုချေ။ သူတို့နှင့်စားလျှင် ဟင်းသုံးလေးခွက်သာ စားရမည်။ ဘုန်းကြီးပွဲကျကိုစားလျှင် ဟင်းခွက် နှစ်ဆယ် အစိတ်စားရမည်ဟု မိန့်တော်မူသည်။ မှန်ပေသည်။ ဆရာမုန်းသည်။ ထမင်းပွဲသို့ ဝင်ထိုင်လိုက်သည့်အခါတိုင်း ဟင်းခွက် ၃၀၀ပါမှ ပွဲတော်တည်တော်မူလေ့ရှိသည့် ပုဂံမင်းဆက် နရသီဟပတေ့မင်းကို အမှတ်ရလိုက်မိသည်သာဖြစ်၏။ ရွာသူရွာသားများသည် တလမှတခါ အလှည့်ကျသော ဆွမ်းအိုးအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံးအင်အားဖြင့် အကောင်းဆုံး အမွန်မြတ်ဆုံးဖြစ်အောင် အထူးကြိုးပမ်းကြလေသည်။
ဆွမ်းက ကောက်ကြီးဆံ၊ ဟင်းလျာက အမဲ၊ ဝက်၊ ကြက် နှင့် ကြုံတောင့်ကြုံခဲရတတ်သော ယုန်၊ ချိုး၊ ခါ၊ ငုံး၊ ပုတတ်သားများ ပါတတ်လေသည်။ ပင်မဟင်းကို ရံထားသည့် ပဲဟင်း၊ ပဲဆိမ့်၊ မှိုကြော်၊ စောင်ချမ်းချဉ်၊ သရက်ချဉ်၊ ပဲပင်ချဉ်၊ ငရုတ်သီးကြော်၊ ငပိကြော်တို့သည်လည်း ဆီတပြန်ပြန်နှင့် ဟင်းစပ်တဲ့အောင် စီမံထားကြသည်ချည်းဖြစ်သည်။
သို့သော်..... သို့သော်.... သို့သော်....။
ဆရာမုန်းသည် မိမိစားပွဲပေါ်တွင်ရှိသည့် ကောက်ကြီးဆန်ထမင်းထက် ကျောင်းသားတို့၏ သပိတ်ထဲမှာ ရှိနေသော 'သုံးလွန်းတင်'ထမင်းကို ပို၍ အာသာတပ်မိလေသည်။ မိမိရှေ့ရှိ ဟင်းမျိုးစုံထက် ကျောင်းမီးဖိုချောင်ထဲမှာ ရွက်အိုးကြီးနှင့် လှုံထားသည့် ချဉ်ပေါင်းခေါ် ဟင်းလေးကို ပို၍ တောင့်တမိသည်။ ဆရာမုန်းသည် ကျောင်းသားဘဝက ဦးကြီး ဦးဆောင်းတို့၏ 'သုံးလွန်းတင်ထမင်းဖွဲ့' လွမ်းချင်းများကို သင်ကြားခဲ့ဖူးပါသည်။ သို့သော်.... မတိုက်ဆိုင်သဖြင့် မစားခဲ့ဖူးချေ။
နောက် ဗဟုသုတ ဟင်းလေးအိုးကြီးခေါ် ကျမ်းစာပါ 'ဟင်းလေး'အကြောင်းကိုလည်း ဖတ်ရှုမှတ်သားခဲ့ဖူးပါသည်။ မကြုံကြိုက်သဖြင့် မမြည်းစမ်းခဲ့ဖူးပေ။ ယခု ရေမြက်ကျောင်းသို့ရောက်ခါမှ တိုက်ဆိုင်ကြုံကြိုက်သဖြင့် တမင်တောင်းယူကာ မြည်းစမ်းစားကြည့်မိသည်။ ဆရာမုန်း တခါတည်းနှင့် ခံတွင်းတွေ့သွားလေသည်။ သို့သော်.... ညနေ၊ ညနေကျမှသာ စားရသည်။ နံနက်ပိုင်း၌ ဘုန်းကြီးပွဲတွင် သုံးလွန်းတင်ထမင်းနှင့် ဟင်းလေး မပါရလေကား ဆရာမုန်းမှာ စားခွင့်မကြုံပဲ ဖြစ်ရလေသည်။
ဟင်းလေးဟူသည် မကုန်၍ ကျန်နေသော ဟင်းများကို စုပေါင်းကျိုထားသည်ဖြစ်ရကား ဦးပဉ္စင်းများ ဘုဉ်းပေးခြင်းငှါ မအပ်။ ထို့ပြင် သုံးလွန်းတင်ထမင်းထက် ကောက်ကြီးဆန်က ပို၍ ကောင်းမွန်သည်ဟု အများက လက်ခံထားလေရာ သုံးလွန်းတင်ထမင်းသည်လည်း ဘုန်းကြီးပွဲမှာ ထည့်၍ ကပ်ရိုးထုံးစံမရှိ။
"ဦးဇင်းဘုရား။ တပည့်တော်ကို သုံးလွန်းတင်ထမင်းနှင့် ဟင်းလေးကို ယူစားခွင့်ပြုပါ"
ဆရာမုန်း၏ လျှောက်ထားချက်ကြောင့် ဆရာတော် ဦးဥက္ကံသမှာ ပြုံးတော်မူ၏။ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို မျက်ရိပ်ပြ အချက်ပေးလိုက်ရာ ဆရာမုန်း၏ ထမင်းပွဲသို့ သုံးလွန်းတင်ထမင်း တဇလုံနှင့် ဟင်းလေးတပန်းကန် ရောက်လာချေသည်။
Posted by မြရွက်ဝေ at 3:47 PM
i also want to eat.
i never eat .
plz...how can i find :)
ဆရာမုန်းပြောထားပုံအရဆို ဟင်းလေးက အရသာရှိမယ့်ပုံနော်... အခုမှ ဟင်းလေးဆိုတာ ကြားဖူးတာ.. စားဖူးဖို့တော့ ဝေလာဝေးပဲ... ရန်ကုန်ပြန်ဖြစ်ရင် ဘုန်းကြီးကိုလျှောက်ပြီး စားကြည့်ရင် ကောင်းမလားလို့ တွေးနေတာ.. :D
ဖတ်နေရင်းနဲ့ဗိုက်ဆာလာလို့မုန့် စားရင်း ဆက်ဖတ် နေရတယ်ဗျ။ အဲဒီ ဟင်းလေးကို လွမ်းလိုက်တာဗျာ။ ငယ်ငယ်က ဘကြီးဘုန်းကြီးကျောင်း သွားလည်ရင် အရင်ဆုံးပြေးကြည့်မိတာ ဟင်းလေးအိုးပေါ့ဗျာ။ ခုခေတ်မှာတော့ ဟင်းလေးလုပ်ဖို့ နေနေသာသာ ဆွမ်းခံရတဲ့ ဆွမ်းနဲ့ ဟင်းကို မနည်းလောက်ငှအောင် ဘုဉ်းပေးနေကြရရှာတယ်။